ဘင်ဖီကာအသင်းမှ ဥရုဂွေး တိုက်စစ်မှူး ဒါဝင်နူးနက် ကို ခေါ်ယူရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့ ယူနိုက်တတ် – Myanmar Sports United
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း သည် ဘင်ဖီကာအသင်းမှ ဥရုဂွေး တိုက်စစ်မှူး ဒါဝင်နူးနက်ကို ကင်းထောက်တွေစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားပြီး နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ျေစးကွက်မှာခေါ်ယူဘို့. ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရဘာတယ် ။ နူးညက်ဟာ ဒီရာသီမှာဘင်ဖီကာအတွက်လဲ ပြိုင်ပွဲစုံ ၃၄ဂိုးအထိ
သွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း ဖော်လန်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဒါဝင်နူးနက်ကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကခေါ်ယူနိုင်တော့မယ်လို့ သိရပြီး forlan မှ ” ကျနော့်အထင်ကတော့ နူးညက်ဟာ အလွန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ ဘင်ဖီကာမှာလဲခြေစွမ်းအရမ်းပြနေပြီးအောင်မြင်တဲ့ ရာသီတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သူဟာ
Benfica’s Uruguayan forward Darwin Nunez celebratesagoal during the Portuguese league football match between SL Benfica and Vitoria Guimaraes SC at the Luz stadium in Lisbon on February 27, 2022. (Photo by Patricia De Melo MOREIRA / AFP) (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)
ပေါ်တူဂီလိဂ်မှာ တင် ခြေစွမ်းကောင်းနေတာမဟုတ်ဘဲ ချန်ပီယံလိဂ်မှာပါ ခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီး ဘင်ဖီကာကိုချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားထိ ပို့‌ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အနာဂတ်မှာ တောက်ပလာမယ့် ကစားသမာ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက်နဲ့လဲ သင့်တော်တဲ့သူပါ။ ယူနိုက်တက်အနေ နဲ့
သူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့ရင်လဲ ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်လာမှာပါ။ သူအနေနဲ့ ယူနိုက်တက်မှာ ကစားရင် အရမ်းကို ကြည့်လို့ကောင်းမှာပါ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျအသငျး သညျ ဘငျဖီကာအသငျးမှ ဥရုဂှေး တိုကျစဈမှူး ဒါဝငျနူးနကျကို ကငျးထောကျတှစေောငျ့ကွညျ့ခိုငျးထားပွီး နှရောသီအပွောငျးအရှေ့ စြေးကှကျမှာချေါယူဘို့. ပွငျဆငျနတေယျလို့ သိရဘာတယျ ။ နူးညကျဟာ ဒီရာသီမှာဘငျဖီကာအတှကျလဲ ပွိုငျပှဲစုံ ၃၄ဂိုးအထိ
သှငျးယူပေးထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျကစားသမားဟောငျး ဖျောလနျရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဒါဝငျနူးနကျကို မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးကချေါယူနိုငျတော့မယျလို့ သိရပွီး forlan မှ ” ကနြေျာ့အထငျကတော့ နူးညကျဟာ အလှနျကိုကောငျးမှနျတဲ့ ကစားသမားတဈဦးပါ။ ဘငျဖီကာမှာလဲခွစှေမျးအရမျးပွနပွေီးအောငျမွငျတဲ့ ရာသီတဈခုကိုပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ သူဟာ
ပျေါတူဂီလိဂျမှာ တငျ ခွစှေမျးကောငျးနတောမဟုတျဘဲ ခနျြပီယံလိဂျမှာပါ ခွစှေမျးပွခဲ့ပွီး ဘငျဖီကာကိုခနျြပီယံလိဂျကှာတားထိ ပို့‌ဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ အနာဂတျမှာ တောကျပလာမယျ့ ကစားသမာ တဈဦးဖွဈပွီး ယူနိုကျတကျနဲ့လဲ သငျ့တျောတဲ့သူပါ။ ယူနိုကျတကျအနေ နဲ့
သူ့ကိုချေါယူခဲ့ရငျလဲ ကောငျးမှနျတဲ့ အပွောငျးအရှေ့ ဖွဈလာမှာပါ။ သူအနနေဲ့ ယူနိုကျတကျမှာ ကစားရငျ အရမျးကို ကွညျ့လို့ကောငျးမှာပါ ” လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။